Aza mandeha! Tsy misy makiazy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Aza mandeha! Tsy misy makiazy
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Vehivavy maro no tsy hiseho imasom-bahoaka amin'ny tarehy miboridana ary mitombo ny isan'ny lehilahy manasitrana ny endrik'izy ireo amin'ny astringents, menaka, sarontava, loko, fantsona ary pensilihazo. Tamin'ny fanadihadiana tamin'ny Mey 2017 ho an'ny mpanjifa amerikana, 41 isan-jato na mpamaly eo anelanelan'ny 30-59 taona no manao manjamaso isan'andro, miaraka amin'ny 25 isan-jato manao makiazy imbetsaka isan-kerinandro.
Ny indostrian'ny fikarakarana manokana an'ny lehilahy dia mety hahatratra $ 166 miliara hatramin'ny 2022 (Allied Market Research). Tamin'ny taona 2018, ny fivarotana vokatra fikarakarana hoditra ho an'ny lehilahy dia nitombo 7 isan-jato tamin'ny varotra ary ny sokajy dia mitentina $ 122 tapitrisa (NPD Group).
The tsenan'ny cosmetika manerantany dia nitentina $ 532.43 miliara (2017) ary antenaina hahatratra ny sandan'ny tsena mitentina 805.61 miliara (2023). Ny indostrian'ny kosmetika amerikana no lehibe indrindra manerantany, ka mahazo vola mitentina 54.89 miliara dolara eo ho eo. Any Etazonia, olona maherin'ny 53,000 ny orinasa.
Ny mpanjifa sasany dia tsy mihevitra ny mividy kosmetika ho fandaniana, mametraka ny fividianana ao amin'ny sokajy "Fampiasam-bola". Ny fividianana lehibe indrindra dia ny: Makeup ($ 932 tapitrisa), arahin'ny Skincare ($ 844 tapitrisa), ary ny varotra Fragrance ($ 501 tapitrisa). Ny ampahany lehibe amin'ny tsena dia fehezin'ny fikolokoloana tarehy (27 isan-jato), arahin'ny fikarakarana manokana (23 isan-jato), fikolokoloana volo (20 isan-jato), makiazy (20 isan-jato) ary hanitra (10 isan-jato).
Tamin'ny fanadihadiana notohanan'ny Groupon (notanterahina OnePoll), dia voafaritra fa mandany $ 3756 isan-taona ny vehivavy ($ 313 isam-bolana), na $ 225,360 eo anelanelan'ny 18-78 amin'ny vokatra fikarakarana hoditra. Ny lehilahy mpihetsiketsika dia mandany $ 2928 isan-taona ($ 244 isam-bolana), mitontaly 175,680 $ na manodidina ny ampahefatra (22 isan-jato) kely noho ny vehivavy mandritra io fotoana io.
Ny mpanjifa dia misafidy ny vokatra fikarakarany tena ao Walmart sy Target, ka ny 57 isan-jaton'ny vokatra fikarakarana hoditra dia novidiana tao anatin'ny 6 volana lasa. Ny fividianana hafa dia alefa any amin'ny fivarotam-panafody ($ 220 miliara), amin'ny alàlan'ny Spa Services ($ 13 miliara); Trano fivarotana ($ 70 miliara dolara), ary mpivarotra kosmetika (10 miliara dolara). Ny marika hatsaran-tarehy lehibe indrindra dia Olay (11.7 miliara dolara); Avon (7.9 miliara dolara), L'Oréal (7.7 miliara dolara); Nivea (5.6 miliara dolara).
Toerana niorina (L'Oréal Group, Proctor & Gamble, Beiersdorf AG, Avon Products, Inc., Unilever, The Estee Lauder Companies Inc., Shiseido, Kao Corp., Revlon Inc., Mary Kay Inc., Yves Rocher, Oriflame Cosmetics Global SA sy Alticor) dia manohy manitatra, ny mpanjifa tanora dia mandà ny vokatra ampiasain'ny ray aman-dreniny, ary mividy mavitrika vokatra vita an-toerana, artisanal, voajanahary amin'ny sokajin'ny mpanjifa rehetra. Raha ny vokatra dia hain'ny Instagram - vao maika maniry izany.
Amin'ny ankabeazany, ny indostrian'ny tarehy dia tsy azo ihodivirana amin'ny fanitarana / fikatsoan'ny toekarena. Ny varotra dia mety milentika mandritra ny fitotonganan-karena; na izany aza, hita fa mbola nividy ireo vokatra na inona na inona mitranga amin'ny Wall Street. Mety ho izany dia noho ny fitohizan'ny fampiasana vehivavy ny vokatra ary mitombo hatrany ny lehilahy, manerantany.
Fa maninona no manao makiazy ny olona?
Maherin'ny 50 isan-jaton'ny vehivavy nadinadinina no nilaza fa ny fanaovana makiazy dia nahatonga azy ireo hahatsapa ho voafehy, 82 isan-jato no nilaza fa natoky tena izy ireo ary 86 isan-jaton'ny vehivavy no nilaza fa nanatsara ny endrik'izy ireo ny fanaovana makiazy.
Ny mponina antitra koa dia antony iray mandroso hatrany ny indostria. Nandritra izay 2 taona lasa izay, ny fihenan'ny tahan'ny fahavokarana sy ny fahafatesan'ny olona dia nahatonga ny fiakaran'ny isan'ny olona mihantitra eran-tany. Misy faniriana mafy eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy hitazona endrika tanora. Ity demografika mihantitra haingana ity dia nanjary nitaky ny vokatra anti-antitra mba hisorohana ny ketrona, teboka amin'ny taona, hoditra maina, tononkira tsy mitovy hoditra ary fahasimban'ny volo, antony manosika mba hanomezana kosmetika vaovao.
Amin'ny 2050, ny mponina mihoatra ny 60 taona dia antenaina hahatratra 2.09 miliara. Ny androm-piainan'ny vehivavy dia voalaza fa hiakatra hatramin'ny 82.7 taona ny taona 2005, ka hatramin'ny 86.3 taona amin'ny 2050. Ho an'ny lehilahy, ny fiakarana antenaina dia avy amin'ny 78.4 ka hatramin'ny 83.6 taona, izay miteraka fitakiana kosmetika tsy mitsaha-mitombo.
Raha mpivarotra tombony no mahazo tombony amin'ny fivarotana vokatra fikarakarana tsara (izany hoe fikolokoloana ny hoditra, fikolokoloana volo ary hanitra) ny ankamaroan'ny vokatra dia amidy amin'ny Internet. Ny orinasa dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fampielezana marketing an-tserasera izay afaka mampitombo ny vola miditra amin'ny fampiasam-bola ambany. Ny tsena dia mahita fironana amin'ireo orinasa iraisam-pirenena manangana tranokala sy kaonty Facebook voafaritra manokana sy mombamomba ny Twitter hiresahana ireo safidin'ny kolontsaina / eo an-toerana.
Ny tsena fitomboana lehibe indrindra dia antenaina fa ny Afovoany Atsinanana (UAE, Saudi Arabia, ary Israel) ary ny faritra afrikana. Nanjary laharam-pahamehana voalohany i UAE satria firenena manana harinkarena faobe isanisany (USD $ 40,444, 2012) miaraka amin'ny fitantanan-draharaha maoderina, ary mampiseho ny mety ho fitomboan'ny vehivavy any am-piasana. Rehefa maro ny vehivavy lasa miasa, ny filana mijery tsara, ary noho izany mividy kosmetika, dia nitombo - tsy miankina amin'ny safidinao fotsiny.
Misy ihany koa ny porofon'ny fitomboan'ny fangatahan'ny mpanjifa any Shina, India ary Malezia, izay vaovao tsara ho an'ny indostria, satria i Amerika Avaratra dia heverina ho "tsena matotra", miaraka amin'ny vina fitomboana mifantoka amin'ny vokatra vaovao sy manavao.
Noho ny filan'ny mpanjifa dia misy ny fitomboan'ny fampiasana akora voajanahary sy biolojika amin'ny vokatra kosmetika ary antenaina hitombo ho 8.3 miliara dolara ny haben'ny tsena amin'ny 2023. Vaovao tsara ho an'ny mpanamboatra izany, satria ny fampiasana akora voajanahary mampihena ny loza ateraky ny voka-dratsiny ary mampitombo ny fampiasana kosmetika amin'ny farany.
Andrasana ihany koa ny fitomboan'ny tsenan'ny fikarakarana fikolokoloana satria misy ny fampitomboana ny fahatsiarovan-tena amin'ireo mpanjifa tsy salama saina fa misy fanomezana tsy misy poizina sy tsy misy simika.
Ny makiazy amin'ny maso dia mitombo ihany koa amin'ny filàna miaraka amin'ny fifantohana amin'ny vokatra azo avy amin'ny rano, indrindra amin'ny vanim-potoana fahavaratra. Ny vokatra mahomby dia miady amin'ny hamandoana sy ny hafanana nefa tsy misy fiatraikany amin'ny kalitao sy ny fahombiazany.
Ny indostrian'ny kosmetika dia manana androm-piainana fohy miavaka fohy ary manatsara hatrany ireo vokatra efa misy sy manadihady ireo fotoana ahafahan'ny fanavaozana ny mpamokatra. Ireo mpandraharaha mampiditra vokatra vaovao dia mahalala fa ny faniriana hahazo fahafaham-po eo noho eo dia lehibe sy matanjaka kokoa noho ny hatramin'izay, vokatr'izany vokatra ahafahan'ny mpanjifa mahita fanatsarana eo noho eo (izany hoe ny faran'ny kitapo ambanin'ny masony sy ny goaika).
Ny magazine, ny sarimihetsika ary ny horonantsary YouTube dia manolotra endrika mitovy amin'ny porselana, malefaka tanteraka ary tonga lafatra… tsy misy voajanahary ny vokany. Na izany aza, ireo manavao, mahafantatra an'io "faniriana" io, dia manolotra vokatra mamorona endrika tsy misy kilema miaraka amin'ny taovolo tonga lafatra.
Ireo mpanamboatra kosmetika tsy miankina dia manosika ny valopy, mampiditra vokatra vaovao sy tsy manam-paharoa fikarakarana tsara. Ny Indie Beauty Show no fanangonana indostrialy tsy miankina mahaleo tena lehibe indrindra eran-tany ary vao haingana izy ireo no nampiseho ny vokatra vaoavao any New York.
Marika maherin'ny 240 no voasolotena tao amin'ny Pier 94 tao amin'ny Indie Beauty Show faha-5 isan-taona. Nandritra ny roa andro, ny mpividy antsinjarany, ny mpanao gazety, ny bilaogera, ny mpampiasa vola, ary ireo matihanina amin'ny indostria hatsaran-tarehy dia nihaona tamin'ny mpandraharaha tompon'andraikitra amin'ny marika ary namporisihina izy ireo hizaha toetra ny vokatra, manao antsitrika lalina ao anaty akora, fomba fitiliana ary valiny andrasana.
Jillian Wright, estetika, dia nanomboka ny Show tamin'ny taona 2015 niaraka tamin'ny mpandraharaha Nader Naeymi-Rad taorian'ny namarihany ny zava-misy fa misy marika vonona amin'ny tsena lehibe, saingy tsy dia vonona handray ireo mpitarika indostria efa misy.
Niaiky ireo mpiara-miombon'antoka fa saika tsy misy ny fotoana ahafahan'ny marika cosmetic / skincare hihaona amin'ny mpampiasa vola na ny mpanjifa. Seho hafa na lehibe loatra na kely loatra (izany hoe tsenabe sy araben'ny tantsaha). Namorona Indie Beauty Show izy ireo hamenoana ny banga ary ankehitriny ny seho dia novokarina tany New York ary koa Dallas sy Los Angeles, London ary Berlin.
Ny tetikasa dia nahazo tombony tamin'ny, "toerana sahaza / fotoana mety." Mila mpanjifa / simika ny mpanjifa - maimaim-poana, vokatra ary te hahafantatra ny olona manao ny zavatra apetrany amin'ny vatany.
Ny kosmetika dia tsy misy parabens, menaka mineraly, phthalates, triclosan, sulfates ary gluten.
Namboarina tany New York, ny akora azo antoka dia misy ny kafe, raozy, menaka jojoba ary kôkômbra. Ny tsipika dia misy lacquers molotra, lokomena matte creamy ary glazes, amin'ny alokaloka manomboka amin'ny miboridana ka hatramin'ny plum lalina ary aloky ny mason-drakitra mamirapiratra.
Ity orinasa afrikanina monina any Afrika ity dia misahana manokana amin'ny famokarana vokatra maharitra, vokatra, voajanahary, voajanahary, tsy misy poizina ary vokatra mahavelona, ​​miorina amin'ny akora nateraka avy amin'ny faritra Sahel.
Ny vokatra dia misy balsama afrikanina maharitra, menaka sy menaka, savony vita amin'ny tanana, shampoos ary bara vita amin'ny volo, miampy solika daty Desert Date, Petala Hibiscus Tea Petals ary Wild Harvested Baobab Powder.
Ny orinasa dia miara-miasa amin'ny Trees for the Future, ary mamboly hazo any amin'ny faritra Sub-Sahara any Afrika amin'ny vokatra rehetra amidy.
Any Les Herbiers, France no misy azy.
Nanomboka tamin'ny 1989 RoyeR Cosmetique dia mampiasa feta sifika organika hiadiana amin'ny ketrona.
Ny menaka dia voalaza fa manana hydrating voajanahary sy manamboatra fananana izay mahomby toy ny fanoherana ny ketrona sy ny fanoherana ny toerana ary ny famoahana.
Ireo akora ireo dia voalaza ihany koa fa hisorohana sy hampihena ny marika mihombo, ny mony, ny fery ary ny olan'ny hoditra hafa.
Ity marika monina any Toronto ity dia natomboky ny mpanatanteraka amin'ny varotra, ny tsikombakomban'ny orinasa ary ny media sosialy.
Ny marika dia mifantoka amin'ny tena fomba fiainan'ny lehilahy ankehitriny, manohana ny fahalianana amin'ny fikarakarana.
Ny vokatra azo antoka, voajanahary, ary biodegradable ary misy volombava, volo ary fikolokoloana ny hoditra, ary koa ny fiharatana.
Kibon-koditra Bellabaci. universalcompanies.com
Ireo vokatra ireo dia manome fitsaboana manokana amin'ny kapoaka ao an-trano. Ny menaky ny zavamaniry dia misy rosehip, boaboa, ary argan.
Mandrosoa kosmetika. hushcosmetics.com.au
2005 Jessica Callahan dia nanomboka ny asany tamin'ny sehatry ny makiazy sy ny hatsaran-tarehy ary ny salon fanaovana hatsaran-tarehy matihanina avy tao an-tranony.
2011 izy no nanokatra ny fivarotana HUSH voalohany.
2016, Callahan dia nankalaza ny 20 taona teo amin'ny sehatry ny indostria ary nandefa magazay an-tserasera miaraka amin'ireo vokatra mbola tsy nosedraina biby sy tsy misy akora namboarina.